बोली फेरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, निर्णयबाट किन पछी हट्यो सरकार ? - Asian Samachar
बोली फेरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, निर्णयबाट किन पछी हट्यो सरकार ?
काठमाडौ- वर्तमान सरकार कतिसम्म फितलोसंग चलिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन बिहिबारको एउटा निर्णय मात्र काफी छ । केही दिनअघि स्पष्टिकरण सोधिएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले बुधबार मात्र स्पष्टिकरण प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाललाई बुुझाएका थिए ।
सो खबर थाहा पाएपछी सबैभन्दा बढी खुशी हुनेमा थिए, उपप्रधान तथा गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधि । निधिल तत्कालै प्रधानमन्त्री दाहाललाई फोन लगाएर भने ‘मौका यही हो । अब प्रक्रिया पुग्यो, भोली फायर गर्नुपर्छ ।’ निधिको कुराले थप बल मिलेपछी प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई मन्त्रीपरिषदको बैठक बोलाउन निर्देशन दिए ।बिहिबार बिहानै बैठक बस्यो ।
बैठकमा ज्ञवालीका पक्षमा कोही नदेखिएपनि तत्कालै हटाउँदा एमाले थप चिढिन्छ भन्नेमा अधिकाँश मन्त्रीहरु थिए । तर गृह मन्त्री निधिले हटाउनै पर्ने जिकिर नछोडेपछी हटाउने निर्णय भयो ।
तर पछी सर्वोच्चले स्टे अर्डर दिन सक्ने महान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठबाट थाहा पाएपछी थाहा पाएपछी मुख्यसचिवलाई माइन्युटमा लेख्न लगाएर फेरी ज्ञवालीलाई किन नहटाउने भन्दै थप अर्को स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय भएको समाचार सार्वजनिक गरियो ।
एक किसिमले भन्दा सरकारले आफैले गरेको निर्णयलाई नाटकिय रुपमा बदलेको छ । यसको खास कारण चाँही सर्वोच्च अदालत हो । स्पष्टिकरण सोधेकै आधारमा हटाउन नमिल्ने प्रावधान पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
महान्याधिवक्ता श्रेष्ठले यही कुरा सम्झाइदिएपछी प्रधानमन्त्री दाहाल गल्ती भएको स्वीकार गर्दै ज्ञवालीलाई हटाउने निर्णयबाट पछी हटेको स्रोतले जनाएको छ ।